Tenga Elastic Chiuno Ankle-kureba Yakasununguka Hip-Hop Harem Men's Pant - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Elastic Chiuno Ankle-kureba Yakasununguka Hip-Hop Harem Men's Pant
zera S (Kurema 35-45kg) M (Kurema 45-52kg) L (Kurema 52-57kg) XL (Kurema 57-65kg) XXL (Kurema 65-70kg) XXXL (Kurema70-75kg) 4XL (Kurema 75-80kg) 5XL (Kurema 80-87kg)
ruvara Nhema Chitubu Zhizha Mutete Yakachena Chitubu Zhizha Yakatetepa
S (Kurema 35-45kg) / Nhema Chitubu Zhizha Mutete M (Kurema 45-52kg) / Nhema Chitubu Zhizha Mutete L (Kurema 52-57kg) / Nhema Chitubu Zhizha Mutete XL (Kurema 57-65kg) / Nhema Chitubu Zhizha Mutete XXL (Kurema 65-70kg) / Nhema Chitubu Zhizha Mutete XXXL (Kurema70-75kg) / Nhema Chitubu Zhizha Mutete 4XL (Kurema 75-80kg) / Nhema Chitubu Zhizha Mutete S (Kurema 35-45kg) / White Chitubu Zhizha Mutete M (Kurema 45-52kg) / White Chitubu Zhizha Mutete L (Kurema 52-57kg) / White Chitubu Zhizha Mutete XL (Kurema 57-65kg) / White Chitubu Zhizha Mutete XXL (Kurema 65-70kg) / White Chitubu Zhizha Mutete XXXL (Kurema70-75kg) / White Chitubu Zhizha Mutete 4XL (Kurema 75-80kg) / Chena Chitubu Zhizha Mutete 5XL (Kurema 80-87kg) / Chena Chitubu Zhizha Mutete 5XL (Kurema 80-87kg) / Nhema Chitubu Zhizha Mutete
Elastic Chiuno Ankle-kureba Yakasununguka Hip-Hop Harem Men's Pant - S (Kurema 35-45kg) / Nhema Chitubu Zhizha Mutete yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Muenzaniso Nhamba: J75121
Muvara: Dema, Muchena
Ongorora: Uku ndiko kukura kweAsia, iri 2-3 saizi diki pane EU / US saizi. Kana iwe ukapfeka EU / US saizi M, unogona kusarudza saizi yedu XL kana XXL. Sezvakayerwa neruoko, mutsauko 1-3 cm unobvumidzwa (1cm = 0.39inch).
Tsananguro inoenderana zvakakwana. Vanomhanya-mhanya vakanaka, vanogara zvakanaka (pakukwirira kwe170 Vakatora XL zvichibva patafura yesayizi). Iyo jira rakareruka uye rakatetepa-mukati mekupisa richava rakanyanya. Homwe dzakadzika-yangu spatula (6,53 inches) inokwana zvakakwana, asi kana iwe ukagara pane kunzwa kuti kwoda kudonha. Lace-inonakidza yekushongedza yekuwedzera, mune zvese inotaridzika zvakanaka. Bhandi rakasungwa pamabhurugwa rakawandisa-haribatisise makumbo zvachose. Chigadzirwa chinokurudzira. Wakakanganwa kutaura-muvara ivo vari pane rima bhuruu. Ini ndaifanira kutamba nemasefa kuitira kuti pikicha iwedzere kana kushoma kufanana.
Bhurugwa rinotonhorera, zvinoenderana nesaizi yePuki, muzhizha kuteedzera zvakanyanya
Hwakanaka mhando, tirauzi rinokwana zvakakwana
Iyo mhando yeiyo jira yakanaka, iwo mameseji eiyo kunyange tambo haanamatire kunze. zvishoma zvinoshanduka asi zvisinga tsoropodzi